ချစ်ရတဲ့ ညီမလေး နဒီရွှေရည်နဲ့ အတူ အနုပညာလှုပ်ရှားမှု တွေလုပ်နေပြီဖြစ်တဲ့ ထိပ်တန်းမင်းသမီး ဝတ်မှုန်ရွှေရည် – Cele Oscar
ကိုယ်အောင်မြင် လာတဲ့အနေအထားတစ်ခုကို ကိုယ်ချစ် ရတဲ့သူတွေကို လက်တွဲခေါ်ချင်တဲ့ စိတ်လေးတွေဖြစ်တတ်သလို ဝတ်မှုန်ရွှေရည်ဟာလည်း သူမရဲ့ချစ်ညီမလေး နဒီရွှေရည်နဲ့အတူ ကြော်ငြာလေးတွေရိုက်သလို အတူတူ Live လွှင့်ပြီး ညီမလေး ကိုပရိသတ်တွေနဲ့ ရင်းနှီးအောင်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ညီမလေးကလည်း မမနဲ့အတူ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေ လုပ်ရတော့ ပျော်မဆုံးပါပဲ။
ကစ်ကစ်နဲ့ကေးကေးဆိုတဲ့ ညီမနှစ်ယောက်ကို ပရိသတ်တွေ ကချစ်ခင်အားပေးကြပြီး ကေးကေးရဲ့ ချစ်စရာ သားလေးဟာလည်း သူမတို့မိသားစုတစ်ခုလုံးရဲ့အသည်းကျော်လေး ဖြစ်သလို ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော်လေးလည်းဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ အိမ်ရဲ့ဆည်းလည်းလေး ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ကေးကေးဟာ ကိုယ်ပိုင်မိသားစုဘဝလေးမှာလည်း အေးချမ်းပျော်ရွှင်ရသူပါ။
ညီမနှစ်ယောက်အတူ Live လွှင့်ခဲ့တဲ့ ချစ်စဖွယ် ပုံလေးတွေကို ” မနေ့ညက ကစ်နဲ့ ကေးလေး Live လေးကို ကြည့်လိုက်ရရဲ့လား??? မနေ့က Give Away ရလိုက်တဲ့သူတွေလည်း အရမ်းပျော်မယ်လို့ထင်ပါတယ် ကစ်ကတော့ ကစ်ချစ်ရ တဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးနဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီး စကားပြောရင်း လက်ဆောင် တွေပေးရတာမို့ အရမ်းပျော် ” ဆိုပြီး ကစ်က သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာဝေမျှခဲ့ပါတယ်။
Photo credit – Wutt Hmone Shwe Yi
ကိုယျအောငျမွငျ လာတဲ့အနအေထားတဈခုကို ကိုယျခဈြ ရတဲ့သူတှကေို လကျတှဲချေါခငျြတဲ့ စိတျလေးတှဖွေဈတတျသလို ဝတျမှုနျရှရေညျဟာလညျး သူမရဲ့ခဈြညီမလေး နဒီရှရေညျနဲ့အတူ ကွျောငွာလေးတှရေိုကျသလို အတူတူ Live လှငျ့ပွီး ညီမလေး ကိုပရိသတျတှနေဲ့ ရငျးနှီးအောငျလုပျပေးခဲ့ပါတယျ။ ညီမလေးကလညျး မမနဲ့အတူ အနုပညာလှုပျရှားမှုတှေ လုပျရတော့ ပြျောမဆုံးပါပဲ။
ကဈကဈနဲ့ကေးကေးဆိုတဲ့ ညီမနှဈယောကျကို ပရိသတျတှေ ကခဈြခငျအားပေးကွပွီး ကေးကေးရဲ့ ခဈြစရာ သားလေးဟာလညျး သူမတို့မိသားစုတဈခုလုံးရဲ့အသညျးကြျောလေး ဖွဈသလို ပရိသတျတှရေဲ့အခဈြတျောလေးလညျးဖွဈနခေဲ့ပါတယျ။ အိမျရဲ့ဆညျးလညျးလေး ကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ ကေးကေးဟာ ကိုယျပိုငျမိသားစုဘဝလေးမှာလညျး အေးခမျြးပြျောရှငျရသူပါ။
ညီမနှဈယောကျအတူ Live လှငျ့ခဲ့တဲ့ ခဈြစဖှယျ ပုံလေးတှကေို ” မနညေ့က ကဈနဲ့ ကေးလေး Live လေးကို ကွညျ့လိုကျရရဲ့လား??? မနကေ့ Give Away ရလိုကျတဲ့သူတှလေညျး အရမျးပြျောမယျလို့ထငျပါတယျ ကဈကတော့ ကဈခဈြရ တဲ့ ပရိတျသတျကွီးနဲ့ ရငျးရငျးနှီးနှီး စကားပွောရငျး လကျဆောငျ တှပေေးရတာမို့ အရမျးပြျော ” ဆိုပွီး ကဈက သူမရဲ့လူမှုကှနျရကျမှာဝမြှေခဲ့ပါတယျ။